Dawnmanhon( ဒေါင်းမာန်ဟုန် ): First lady Laura Bush offers cyclone aid to Myanmar.
First lady Laura Bush offers cyclone aid to Myanmar.
source။ ။ voa
အမေရိကန်သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ရာဂဏန်းကနေ ထောင်ဂဏန်း၊ ထောင်ဂဏန်းကနေ သောင်းဂဏန်းအထိ ရှိလာချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ကြေကွဲပါကြောင်း သမ္မတကတော်က အိမ်ဖြူတော်မှာ တနင်္လာနေ့ညနေသုံးနာရီခွဲမှာ ကျင်းပသွားတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
“အခုလို ကြေကွဲဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေ ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အများစုလည်း ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားကြသလို ဆုတောင်းမေတ္တာလည်း ပို့သနေကြပါတယ်။” လို့ သမ္မတကတော်က ပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်က မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို တနာရီ မိုင် ၁၂၀ နှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်လာတဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းကို စောစောကတည်းက မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ သိရှိလျက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို လုံလောက်တဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ် သတိ ပေးချက်တွေမရှိဘဲ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကတဆင့် အသေးစိတ်ကြားသိရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း သမ္မတကတော်က ထောက်ပြသွားပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဟာ ကျရောက်တော့မယ့် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကို လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံနဲ့ ဗွီအိုအေအသံလွှင့်ဌာန အစရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေရဲ့ နှိုးဆော်ချက်တွေကနေ ကြားသိရတဲ့အဖြစ်ဟာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ကျရောက်တော့မယ့် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကို ကြိုတင်သိထားကြပေမယ့် မြန်မာအစိုးရပိုင် သတင်းမီဒီယာတွေက အချိန်မီ လုံလောက်တဲ့ အသိပေးမှုတွေကို မုန်တိုင်း ချဉ်းကပ်လာတာနဲ့အမျှ အသိပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာ တွေ့ရတယ်။” လို့ သမ္မတကတော်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ကြရတဲ့ ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ မွန်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တို့ကို အရေးပေါ်ဘေးဒုက္ခဒေသတွေအဖြစ် ကြေညာခဲ့ပေမယ့် အထူးသဖြင့် မုန်တိုင်းဒဏ်အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီ မပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလည်း နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလို မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်က မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူတွေကို ထိရောက်စွာ အချိန်မီ အကူအညီပေးနိုင်မှု အားနည်းခဲ့တာကိုလည်း သမ္မတကတော်က ဝေဖန်သွားပါတယ်။
“အခုလို မုန်တိုင်းဒဏ်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တုံ့ပြန်မှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဟာကွက်တွေအနက် လတ်တလောအကျဆုံး သာဓကပါပဲ။ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံရဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု စနစ်အားလုံးကို ပျက်သုဉ်းစေခဲ့ပါတယ်။ တချိန်က ချမ်းသာလှတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ တဦးကျဝင်ငွေ အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဆင့်ကိုလည်း ကျသွားခဲ့ပါတယ်။” လို့ သမ္မတကတော်က ပြောကြားသွားတာပါ။
အခုလို မုန်တိုင်းဒဏ်အတွက် အရေးပေါ်အကူအညီအဖြစ် ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးက ဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲကို ကယ်ဆယ်ရေးအလှူငွေအဖြစ် ပေးခဲ့တဲ့အပြင် ဒါ့ခေါ် အရေးပေါ် အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်အကူအညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့လည်း မစ္စစ်ဘုရ်ှက ပြောသွားပါတယ်။
“အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အစောပိုင်းအကျဆုံးပေးတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီကတော့ သံရုံးကနေ တခြားအန်န်ဂျီအိုတွေကို ကူညီပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာရှိနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကြီးလို အဖွဲ့တွေကတဆင့် ပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အရေးပေါ်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ဒါ့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ ၀င်ခွင့်ရရင် အဲဒီမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဒေသတွေဆီသွားပြီး လေ့လာကာ လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ပစ္စည်း အထောက်အပံ့တွေကို ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနီးမှာလည်း အမေရိကန်ရဲ့ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေက အဆင်သင့်ရှိနေပါပြီ။ ဒါ့အဖွဲ့ကလည်း အကူအညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။” လို့ သမ္မတကတော်က ပြောကြားသွားပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရကို အခုလိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
“အမေရိကန်ရဲ့ အကူအညီကို မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်မခံမှာ ကျမ စိတ်ပူမိပါတယ်။ အမေရိကန်အပြင် နိုင်ငံတကာကပေးအပ်တဲ့ အကူအညီကိုလက်ခံပြီး အလိုအပ်ဆုံးလူတွေကို ကူညီခွင့်ပြုပါ။” လို့ သမ္မတကတော်က တိုက်တွန်းပြောကြားသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုလို မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူပေါင်း သောင်းနဲ့ချီသေဆုံးပြီး သိန်းနဲ့ချီ အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ မေ ၁၀ ရက်နေ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်ကို ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း သမ္မတကတော်က ဝေဖန်သွားပါတယ်။
“အခုလို သီတင်းပတ်အတွင်းမှာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်နေရတဲ့ကြားကနေ မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံ ပြည်လုံးကျွတ် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို မေလ ၁၀ ရက်နေ့ ကျင်းပဖို့ ကြေညာခဲ့တယ်လို့ ကျမတို့ နားလည်ထားပါတယ်။ ဒီဆန္ဒခံယူပွဲဟာ သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးကို တရားဝင်ဖြစ်စေဖို့ ကြံစည်ရေးဆွဲထားတာပါ။” လို့ သမ္မတကတော်က ပြောသွားပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း သမ္မတဘုရ်ှက ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို မြန်မာအစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းတွေအပေါ် ထပ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ သမ္မတကတော်က ပြောခဲ့ပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်က လွှတ်တော်ရွှေတံဆိပ်ပေးအပ်ဖို့ အဆိုပြုချက်မူကြမ်းကိုလည်း သမ္မတဘုရ်ှက မနက်ဖြန် လက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတကတော်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
မူရင်း ။ ။ မျိုးချစ်မြန်မာ (you tube)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 6:47 PM